सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन डढेलोको उच्च जोखिम « Anumodan National Daily
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन डढेलोको उच्च जोखिम
धनगढी । हरेक वर्ष प्रायः फागुनदेखि जेठ महिनासम्म वन डढेलोको जोखिम रहने गर्दछ । डढेलो नियन्त्रणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण डढेलोबाट हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मासिदै गएको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन अतिक्रमणका कारण भन्दा बन डढेलोका कारण बढि वन विनास भइरहेको छ ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति, कैलालीका अध्यक्ष डण्डिराज सुवेदीले डढेलोका कारण वर्षेनी वन क्षेत्र मासिदै गइरहेको बताए । उनल भने– वन क्षेत्रमा डढेलो लागेपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री र दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव भएका कारण वर्षेनी ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।
विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि अति जोखिम, जोखिम र न्यून जोखिम क्षेत्र पहिचान गरि त्यस अनुसार नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम तय गरिन्छन् । बन डढेलोलाई सरकारले विपद मानेको भए पनि त्यसअनुसार तयारी भने गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले भने– हामीले कुन क्षेत्र कति जोखिममा रहेको छ त्यो बारे पहिचान गरेका छैनौ र यसबारे अध्ययन पनि भएको छैन ।
उनका अनुसार मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयहरूले जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पा“च वटा जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी र बैतडीको वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा छन् । सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– हिमाली क्षेत्रमा सुख्खा कम हुँदा वन डढेलोको जोखिम पनि कम रहन्छ ।
प्रदेशमा १० लाख १९ हजार आठ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ । गर्मीयाम शुरु भएसंगै यस वर्ष डढेलोको थप जोखिम बढेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले भने– अहिलेको मौसम लगायत विभिन्न कारणले यो वर्ष डढेलोले उग्र रुप लिने अनुमान गरेका छौ ।
उनले मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयले डढेलो लाग्न नदिन नै प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताए । उनले भने– डढेलो लाग्न नदिन हामीले मानिसमा सचेतना फैलाउनुपर्छ । बन डढेलो फैलियो भने नियन्त्रणको प्रयास गरिनेछ ।
प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद र अग्नि नियन्त्रणका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले सामग्री खरिदका लागि ४८ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ भने विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि ३९ लाख ५० हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– अहिले डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ भने सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा जोखिम नियन्त्रण समिति गठन गरि परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । मन्त्रालय तथा मातहातका कार्यालयहरूले वन भित्र सुकेका झाँडलाई एकलाउने, अन्तरक्रिया गर्ने, पर्चा पम्पलेट बाडने, टोली परिचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । यस्तै, डढेलो नियन्त्रणका लागि सक्रिय व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाएको छ ।
किन छ डढेलोको जोखिम ?
सुख्खायाममा वन डढेलोको जोखिम हुनु सामान्य हो । तर, यस वर्ष सरकारले ढलापडा रुखहरू पनि संकलन गर्न दिएको छैन । जसका कारण झारपातदेखि ती ढलापडा रुखमा आ“गो लाग्ने देखिएको छ । यसले गर्दा डढेलोले यस वर्ष जोखिम निमत्याउने मन्त्रालयले आ“कलन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– हावाहुरीले रुखहरू ढलेका छन् । त्योसंगै सकेका पातहरू पनि फैलिएका छन् । सामान्य आगो लागेपनि डढेलो फैलिन्छ । यसले गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन ।’
डढेलोको मुख्य कारण मानवनै रहेको छ । मानिसले चुरोट खाएर जथाभावी फ्याक्ने, पिक्निकका लागि जाँदा बालेको आगो ननिभाउने लगायतका कारण वनमा डढेलो हुने गरेको छ । प्राकृतिक कारणले न्यून रुपमा वनमा डढेलो हुने गरेको वन विज्ञ रमेश चन्द बताउँछन् । उनले भने– प्राकृतिक भन्दा पनि मानवकै कारण वनमा डढेलोको जोखिम छ ।’ यस्तै, विभिन्न सरकारबाट सञ्चालन भएका सडक विस्तारले पनि बन डढेलो निम्तने गरेको छ । उनले भने– सडक कालोपत्रे गर्दा आवश्यक सामाग्री बनाउन आगोको प्रयोग गरिन्छ । त्यहाँ रहेका मजदुर आगो ननिभाउदा वनभित्र पस्छ ।
उनले मजदुर लगायत वन क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई डढेलोसम्बन्धी जानकारी दिन आवश्यक रहेको र नियन्त्रणका लागि सामाग्रीहरू पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए ।
तराईमा बढि जोखिम किन ?
कैलालीमा गत वर्ष कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत वन क्षेत्रमा डढेलो फैलियो । गत वर्ष धेरै गर्मी नभएका कारण वन क्षेत्रमा डढेलोले धेरै नोक्सान गर्न पाएन र समयमै नियन्त्रणमा आएको थियो । तर, यस वर्ष यहाँ थप जोखिम रहेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– वन अतिक्रमण गरेर मानिस बसेका छन् । जहाँ मानव वनसंग जोडिन्छ त्यहाँ डढेलोको जोखिम हुन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा डढेलोका कारण ४० प्रतिशत वन सखाप भएको थियो । जंगलमा डढेलो लगाउन नहुने चेतना नहुनु र डढेलो लग्दा निभाउन सक्ने प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण नहुनुले पनि वन विनाश हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
समुदायमा रहेका केही गलत सोच भएका मानिसले जंगलमा आगजनी गर्ने र सामुदायिक वनमा विमती राख्नेहरूले जंगलमा डढेलो लगाइ दिंदा डढेलोका कारण पनि जंगल मासिने गरेको उनी बताउँछन् । गर्मीको मौसम त्यसमा पनि सुकेका पातपतिंगर र सुकेका ढलापढा काठले पनि डढेलो लाग्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डढेलोले बर्सेनि जंगल सखाप पार्ने गरेको छ ।’